सरकार र डा. केसी सम्झौतामा, आज अनशन तोडिने-NepalKanoon.com
सरकार र डा. केसी सम्झौतामा, आज अनशन तोडिने
भदौ २०, काठमाण्डौं । चिकित्सा शिक्षाका बेथितिविरुद्ध त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छैटौंपटक तेह्र दिनदेखि अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा। गोविन्द केसीसँग सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेको छ।
हिजो राति साढे ११ बजे सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल तथा डा। केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतालाई भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजानेछ।
डा। केसीले सम्झौतापछि पनि शान्ति, मेलमिलाप, नेपालीबीच भाइचारा र संविधानका लागि थप एक दिन अनशन जारी राख्ने जानकारी दिएका छन्। जसअनुसार आज दिउँसो ३ बजे उनलाई जुस पियाउने कार्यक्रम तय भएको छ।